2013 MV Agusta F3 First Ride – Euro Cycles of Tampa Bay | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36070)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9930)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9629)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9020)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8672)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8259)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7344)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7298)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6313)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5888)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5857)
နေအိမ် → Agusta → 2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် - Tampa ဂလားပင်လယ်အော်၏ယူရို Cycle
20 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် – Tampa ဂလားပင်လယ်အော်၏ယူရို Cycle
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးဆုံးအစီးနင်
In the face of the global sportbike sales slump, Boutique အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ဘော MV Agusta က၎င်း၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ F3 အတူဝင်ပြီး middleweight supersport စျေးကွက်အားကောင်းလာစေပြီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 675cc သုံးဆ-ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကိုအားဖြင့် Powered, အဆိုပါ F3 ($13,999) အထွတ်အနေဖြင့်အထွတ်မှရောက်လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပေါ်အခြားဥရောပယူဖြစ်ပါသည်.
Born four years earlier, အဆိုပါ F3 သင်္ဘော MV ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်, Claudio Castiglioni, အဘယ်သူသည်ကင်ဆာမှသည်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီရွေ့သွားကွယ်ပျောက်မတိုင်မီသုံးဆလင်ဒါ sportbike ပြန်တမ်း. လမ်းပြိုင်ကားအတွက်၎င်း၏နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်သမိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, သင်္ဘော MV အဖြစ်အစောပိုင်းလာမယ့်ရာသီအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ကားစီးရီး - စက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် World Supersport ၏တောင်းဆိုချက်များကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်. ၏ပိုလျှံအတွက် 20 သန်းယူရိုမြောက်ပိုင်းအီတလီမှာသင်္ဘော MV ရဲ့ဌာနချုပ်မှာအိမ်တော်၌ဆောင်ရွက်တစ်ခုလုံးကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူစီမံကိန်းသို့ funneled ခဲ့သည်.
အဆိုပါ F3 ၏အဓိကအရည်-အအေးဖြစ်ပါသည်, 12-အဆို့ရှင်ဦးခေါင်းကိုနှင့်အတူအင်လိုင်းသုံးဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကို (အားလုံးအဆို့ရှင်တိုက်တေနီယမ်ကနေလုပ်ကြံနေကြတယ်) အမွှာကွင်းဆက်-မောင်းနှင် Camshaft အားဖြင့်ပတ်ချာလည်. တစ်ခုချင်းစီကိုဆလင်ဒါ၏အတော်လေး Over-စတုရန်းထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုသည် 79.0 x က 45.9mm, တစ်အချိုးမှလောင်စာဆီတာဝန်ခံဖျစ်ညှစ် 13:1. အဆိုပါအင်ဂျင်ရဲ့အောက်ဆုံး-ဆုံးလက်ကိုင်နောက်ပြန် spins ထားတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းန်ထမ်း.
ဒီအမြင့်မားတဲ့အင်ဂျင်ကအမြန်နှုန်းမှာထိန်းရပိုလွယ်အောင်ရွေ့လျားမှုအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏ရှေ့ဆက် inertia ကြားကူညီပေးသည်, သင်္ဘော MV ပြောပါတယ်.
အီတလီအရှိဆုံးသောအရာတို့ကိုလိုပဲ, form follows function and the profile of the motor is one of sleekest and minimalist we’ve seen onastreet bike to date. Both the water and oil pumps are integrated into the engine block, as is the cooling passages, so the only external fittings are for connecting the stacked radiators (one water and one oil).
Additional functionality comes in the form of engine/throttle mode adjustment. Four settings are offered: မိုးရေ, Normal, Sport andaCustom map that allows the rider to configure Gas Sensitivity (throttle response), Engine Braking (Sport or Normal), Maximum Torque (Sport or Rain), Engine Response (Fast or Slow), and rpm Limiter (Sport or Normal), all independently of one another.
Weight distribution and packaging wasakey design concept and engineers were tasked with cramming components within the smallest area possible. The main frame is fabricated from steel tubes that merge to aluminum spars where the swingarm attaches (also fabricated from aluminum and single-sided). Wheelbase measures 54.23 လက်မ, which is right inline with many of the Japanese 600s.
2012 Agusta ရက်စက်စွာသင်္ဘော MV 1090 R ကို & RR Review – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
Agusta ရက်စက်စွာသင်္ဘော MV 920 naked Italian passion Daily Maverick
2010 Agusta ရက်စက်စွာသင်္ဘော MV 990 R ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
သင်္ဘော MV Agusta F3
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: BMW ကားသင်္ဘော MV Agusta မှစ. Husqvarna ဝယ်ယူ
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: BMW ကားသင်္ဘော MV Agusta မှစ. Husqvarna ဝယ်ယူ
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် JeanRichard စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Chronoscope သင်္ဘော MV Agusta ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာအမေရိကားသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့…
ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Desmosedici GP11 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 Aprilia Mana 850 Bajaj Discover Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး Colleda CO Brammo Enertia မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati 60 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Ducati Diavel စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စက်ဘီး Kawasaki ER-6n သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix